Madaxweyne Farmaajo mashiinka soo celi – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweyne Farmaajo mashiinka soo celi
Madaxweyne Farmaajo mashiinka soo celi
Wariye Cabdicasiis Gurbiye ayaa saakay lagu xiray Saldhiga Hodan ee magaalada Mogadishu. Amarka lagu xiray wariyaha ayaa waxa bixiyay Madaxtooyada Soomaaliya, kadib markii shalay wariye Cabdicasiis qoray in Madaxweyne Farmaajo qaatay mashiin loogu deeqay dadka qaba cudurka Covid 19 ee ku karantiilan Isbitaal Martiini. Mashiinkaan ayaa loogu talo galay neef siinta sanbabada marka shaqadoodu ciriiri gasho, waxaana afka qalaad lagu yiraahdaa “VENTILATOR”. Shalay ayaa waxaa tagay Isbitaal Martiini mas’uuliyiin ka socda Madaxtooyada Soomaaliya, waxayna gaba-gabeeyeen shaqaalaha Isbitaal Martiini, waxaana la waydiiyay su’aalo la xiriira cida sheegtay mashiinkaan in Isbitaalka laga qaaday Madaxtooyadana la geeyay.
Haddaba, waxaan ugu baaqaynaa hay’adaha amniga iyo Madaxweynaha Soomaaliya in Cabdicasiis xorriyadiisa si degdeg ah loogu soo celiyo. Aanan lagu xadgudbin xorriyada hadalka iyo xuquuqda wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ku shaqeeya daruufo aad u adag. Sidoo kale waxaan kula talinaynaa Madaxweynaha hadii uusan rabin in wax laga sheego in uu si degdeg ah ku soo celiyo mashiinka laga qaaday Isbitaal Martiini ee Madaxtooyada la geeyay. Sababtoo ah baahida cabsi ee Madaxtooyada kajirta mid ka daran oo waliba dhab ah ayaa kajirta Isbitaalada Mogadishu. Waana sababta dad mas’uuliyiin ah ugu geeriyoodeen Isbitaal Martiini baahi loo qabo mashiinkaan daraadeed.
Waa qoray Xildhibaan Mahad Salad.
Previous article8 qof oo cusub oo laga helay CORONAVIRUS gudaha Ethiopia oo somali ku jiro ,
Next articleMadaxtooyada kuma ogayn In ay tahay meel bukaanada la seexiyo, haddii aan umadda xog-jirta oo kale laga qarinayn!
(Akhriso) Magacyada Odayaasha soo xulaya Barlamaanka Jubbland oo la shaaciyay